Fahad Yaasiin oo dhex-dagay Garoonka diyaaradaha | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad Yaasiin oo dhex-dagay Garoonka diyaaradaha
Taliyaha NISA ayaa xaaladda ku sun xilligan, isagoo cabsi darteed uga soo guurey Villa Somalia, isagoo uu ka shakiyay ragga ilaalada ka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha Hay'adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasiin ayaa habeenkii 3aad ku hooyanaya Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, sida ay illo ku dhaw NISA u xaqiijiyeen Keydmedia Online.
Fahad Yaasiin oo amaankiisa loo ilaaliyo si ka adag midka Farmaajo ayaa kasoo guurey Villa Somalia iyo xarunta NISA ee Gabar-Khadiija saddex maalmood kahor xili dalka uu galay maraxalad colaadeed.
Wuxuu dhex dagay saldhigga NISA ku leedahay Garoonka diyaaradaha, waxaana ka agdhaw xarunta CIA-da Mareykanka ku leedahay dhismaha amaankiisa aadka loo ilaaliyo, oo sidoo kale ku dhegan Xalane.
Dagaal ayaa Maanta ka dhacay waqooyiga Muqdisho kadib markii boqolaal qof oo kasoo horjeeda qorshaha Farmaajo ee boobka doorashadda ay dhigeen dibadbaxyo rabashado wata, oo dhimasho iyo dhaawac sababay.
Fahad Yaasiin oo ah ninka ka mas'uulka ah waxa dalka ka socda ayaa dhuumasho iyo orod billaabay, isagoo u baqay naftiisa, maadaama uu falkiyay fowdo iyo dagaal laga cabsi qabo inay ka billowdaan dalka.
Taliyaha NISA oo kasoo jeeda beel aad u yar oo lagu magacaabo Reer Aw-Xasan, ayaa gaashaan uu isku difaaco ka dhigtay NISA, oo ah hay'ad sirdoon oo u adeegsado inuu ku ucaburiyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowladda uu dhisay.